मैले ग्राहकहरूको लागि नयाँ ड्रोन खरीद गरें ... र यो आश्चर्यजनक छ Martech Zone
बिहीवार, जनवरी 9, 2020 बिहीवार, जनवरी 9, 2020 Douglas Karr
केही वर्ष पहिले, म उनीहरूको अनलाइन उपस्थितिमा ठूलो छत ठेकेदार सल्लाह गर्दै थिए। हामीले उनीहरूको साइटलाई पुनर्निर्माण र अप्टिमाइज गर्‍यौं, समीक्षा कब्जा गर्न जारी ड्रिप अभियान शुरू गरेका थियौं, र तिनीहरूको प्रोजेक्टहरू अनलाइन प्रकाशित गर्न थाल्यौं। हराइरहेको एउटा चीज, यद्यपि सम्पत्तीहरूको फोटोको अघि र पछाडि थिए।
तिनीहरूको उद्धरण र प्रोजेक्ट प्रबन्धन प्रणालीमा लगइनको साथ, मैले कुन गुणहरू बन्द भइरहेको र परियोजनाहरू समाप्त भएको बेलामा हेर्न सक्षम भएँ। अनलाइन समीक्षाको एक टन पढेपछि, मैले एउटा खरीद गरें DJI Mavic Pro ड्रोन.
जबकि ड्रोनले शानदार तस्बिर लिए र उडान गर्न सजिलो थियो, वास्तवमा सेटअप गर्न र अपरेट गर्न एकदम कष्टकर थियो। मैले डीजेआईमा लगइन गर्नुपर्‍यो कि एक आईफोन अनुप्रयोग सोच्यो, फोनलाई कन्ट्रोलरमा जोड्नुहोस्, र नराम्रो ... प्रत्येक उडानमा लगइन गर्नुहोस्। यदि म प्रतिबन्धित क्षेत्रमा थिए भने, मैले मेरो उडान पनि दर्ता गर्नुपर्‍यो। मैले एक दर्जन वा यति परियोजनाहरूको लागि ड्रोन प्रयोग गर्‍यो र त्यसपछि ग्राहकसँग बेचे पछि मैले उनीहरूसँग सम्झौता गरें। यो राम्रो ड्रोन हो, उनीहरूले आज पनि प्रयोग गरिरहेका छन्। यो भर्खरै प्रयोग गर्न सजिलो थिएन र मसँग अर्को क्लाइन्ट थिएनन् जहाँ यो कुनै अर्थ भएको थियो।
द्रुत अगाडि एक बर्ष र मेरो मिडवेस्ट डाटा सेन्टरले नयाँ, अत्याधुनिक राज्य खोल्दै थियो फोर्ट वेनमा डाटा सेन्टर, इंडियाना जसमा EMP ढाल समावेश छ। यो मेरोलागि केही ड्रोन शटहरू कब्जा गर्ने समय हो, त्यसैले मैले यस क्षेत्रमा केही फोटोग्राफरहरू र भिडियोग्राफरहरूलाई समातें।
मैले कामका लागि प्राप्त गरेको उद्धरणहरू निकै महँगो थियो ... कम्पनीका locations स्थानहरूको भिडियो र फोटोहरू खिच्न सब भन्दा कम being $००० थियो। ड्राइभको समय र मौसम निर्भरता दिईएको खण्डमा त्यो खगोलीय थिएन ... तर म अझै त्यस्तो किसिमको खर्च लिन चाहन्नथें।
Autel रोबोटिक्स EVO
म बाहिर गयो र अधिक समीक्षा अनलाइन पढें र बजारमा एक नयाँ खेलाडी लोकप्रियता मा आसमान छ कि पाए Autel रोबोटिक्स EVO। कन्ट्रोलरमा निर्मित स्क्रिनको साथ र लगइन गर्न आवश्यक पर्दैन, म केवल ड्रोन बाहिर निकाल्न सक्दछु, उडान गर्न सक्दछु, र मैले आवश्यक भिडियोहरू र फोटोहरू लिन सक्दछु। यसमा छत छ जुन धेरै धेरै छ त्यसैले त्यहाँ FAA दर्ता वा लाइसेन्स आवश्यक छैन उडान गर्न। कुनै सेटअप छैन, कुनै जडान हुने केबुलहरू छैन ... केवल यो खोल्नुहोस् र यसलाई उडान गर्नुहोस्। यो अद्भुत छ ... र वास्तवमा माभिक प्रो भन्दा कम खर्चिलो थियो।
ड्रोनको लागि उत्पादन विवरण:
अगाडि EVO मा सुसज्जित एक 3-अक्ष स्थिर जिमबल मा एक शक्तिशाली क्यामेरा प्रदान गर्दछ कि 4k रिजोलुसन मा भिडियो प्रति सेकंड 60 फ्रेम सम्म रेकर्ड गर्दछ र H.100 वा H.264 कोडेकमा 265mbps सम्म रेकर्डिंग गति।
रियल गिलास अप्टिक्सको प्रयोगले अधिक विवरण र र for्गका लागि विस्तृत गतिशील दायराको साथ १२ मेगापिक्सलमा आश्चर्यजनक फोटोहरू क्याप्चर गर्दछ।
एकीकृत उन्नत कम्प्युटर दृष्टि प्रणालीले अगाडि अवरोध परहेज प्रदान गर्दछ, रियर अवरोध पत्ता लगाउने र तलको सेन्सर अधिक सटीक अवतरण र स्थिर इनडोर उडानहरूको लागि।
O. minutes माईल (K केएम) को दायराको साथ ईभीओले minutes० मिनेटसम्म उडान समय समेटेको छ। थप रूपमा, EVO ले फेलसेफ सुविधाहरू प्रदान गर्दछ जब तपाईंलाई ब्याट्री कम छ र घर फर्कने समय हो।
इभियोले रिमोट कन्ट्रोलर समावेश गर्दछ जसले critical.3.3 इन्च OLED स्क्रिन राख्दछ जुन तपाईंलाई महत्वपूर्ण उडान जानकारी वा लाइभ 720२० एचडी भिडियो फिड प्रदान गर्दछ जुन तपाईंलाई मोबाइल उपकरणको आवाश्यकता बिना क्यामेरा दृश्य देखाउन दिन्छ।
एप्पल आईओएस वा एन्ड्रोइड उपकरणहरूको लागि उपलब्ध नि: शुल्क अटेल एक्सप्लोरर अनुप्रयोग डाउनलोड गर्नुहोस् र रिमोट कन्ट्रोलरसँग जडान गर्नुहोस् र अधिक उन्नत सेटि settingsहरू र गतिशील ट्र्याक, भ्यूपोइन्ट, अर्बिट, वीआर पहिलो व्यक्तिको दृश्य र वेपोइन्ट मिशन योजनाको रूपमा स्वचालित उडान सुविधाहरूमा पहुँच प्राप्त गर्नुहोस्।
ईभोसँग फाइलहरूको सजिलो स्थानान्तरणको लागि माइक्रो एसडी स्लट छ।
मैले थप ब्याट्री र ड्रोन बोक्नको लागि नरम केस खरीद गरें। यो राम्ररी गुड्छ र बोक्न सजिलो हुन्छ।
Autel रोबोटिक्स EVO ड्रोन बन्डल किन्नुहोस्
हामीले नयाँ डाटा सेन्टरमा खुला घर राख्यौं र मैले ड्रोन लिन, केही फोटोहरू र भिडियोहरू लिए, र तिनीहरू राम्रा बाहिर आए। स्थानीय प्रेस त्यहाँ थियो र म तिनीहरूलाई भिडियो पठाउन सक्षम थिए जुन उनीहरूले पछि उनीहरूको समाचार कथामा प्रयोग गर्थे। केही हप्ता पछि, अर्को समाचार कार्यक्रमले मालिकहरूको अन्तर्वार्ता लिए र भिडियो समावेश गरे। र मैले यसका छविहरू र भिडियो सहित उनीहरूको वेबसाइटलाई अनुकूलन गरे। यहाँ छविहरू छन्:
लाइफलाइन डाटा केन्द्रहरू ड्रोन शटहरू
यो मैले खर्च गरेको सब भन्दा राम्रो $ १,००० थियो ... लगानीमा अद्भुत रिटर्न भैरहेको छ र एकदमै खुशीको ग्राहक। सबै भन्दा राम्रो, यो कुनै पनि चलान को कुनै पनि चलान को आवश्यकता थिएन ... केवल निर्देशनहरू पढ्नुहोस् र तपाईं एकै मिनेट भित्र सही शट लिदै हुनुहुन्छ। मैले यसलाई बाहिर निकाले पनि र सीमाको बाहिर उडानको परीक्षण गरें ... र यो केही मिनेटमा नै फिर्ता भयो। अर्को समय, मैले वास्तवमा यसलाई रूखमा उडाएँ र यसलाई हल्लाउन म सक्षम थिए। र अझै अर्को पटक, मैले यो एउटा घरको छेउमा उडिदिए ... र आश्चर्यजनक रूपमा यसले केही पनि क्षति पुर्‍याएन। (Whew!)
साइड नोट: Autel यो ड्रोन को नवीनतम संस्करण, Autel रोबोटिक्स EVO II घोषणा गरेको छ ... तर मैले यो अहिले सम्म अमेजन मा देखेको छैन।
प्रकटीकरण: म मेरो लेख सम्बन्धी दुबै DJI र Amazon को लागि मेरो सम्बद्ध कोडहरू प्रयोग गर्दैछु।
टैग: औटलautel रोबोटिक्स ईवीओautel रोबोटिक्स EVO 2DJIDJI Mavicड्रोनड्रोन फोटोहरु